Fikojakojana lalana Inona no ao ambadiky ny tsy fanendrena Sekretera jeneralin’ny FER ?
Fanamboaran-dalana eto Antananarivo Renivohitra Haharitra 30 taona ary azo antoka amin’ny fahavaratra
Azo antoka na “garanti”ny lalana izay amboarina eto Antananarivo Renivohitra ary haharitra 30 taona izany.
Kalitaon`ny fitaterana Miharatsy ny tolotra
Mitohy hatrany ny tsy refesi-mandidy ataon’ny mpitatitra sy ny mpanampy azy eo anivon’ireo zotra mampifandray eto Antananarivo Renivohitra.
Antanambao Manampontsy Ny lalana no mamotika ny toekarena
Ny lafiny rehetra ahafahana mandroso dia ananan’ny ditrikan’i Antanambao Manampontsy avokoa na ny fambolena, fiompiana, harena ankiboan tany, ny ala…
Fiarovana amin’ny Pesta -Fasan’ny karana Hentitra ny ATT amin’ny fampiharana ny “manifold”
Teny amin’ny toby fiantsonana eny amin’ny Fasan’ny Karana ny sabotsy teo no nanatanteraka ilay asa tagnamaro andiany faharoa ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety sy ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC.
Analamahitsy Fiara 206 nivadika ambony ambany
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Analamahitsy fidinana ho any amin’ny Coliseum ny zoma alina hifoha sabotsy teo,
Lalana tapaka etsy Soanierana Harenina ao anatin’ny roa volana
Efa ho herintaona izao no nijaly fatratra ireo mponina eny Soanierana sy ny manodidina noho ny fihotsahan’ny lalana.
Tanjombato Taksibrosy roa tsy ara-dalàna, tratra nitondra mpandeha
Taksibrosy roa sprinter sy mazda no saron’ny polisy teny Tanjombato nitatitra olona nikasa hivoaka ivelan’Antananarivo, ny sabotsy teo.
Banga efa volana maro izao ny toeran’ny Sekretera jeneralin’ny Tahiry ho fikojakojana ny lalana na FER (Fonds d’Entretien Routier) rehefa nahavita fe-potoam-piasana telo taona in-droa ny tompon-toerana.
Nisy fanendrena Sekretera jeneraly vonjimaika saingy efa dila herinandro vitsy koa izay fe-potoana niasan’io. Manontany tena ny maro ny anton’io fitarazohan’ny fanendrena ny Sekretera jeneralin’ny FER io. Re mantsy fa efa nisy anarana naroso taorian’ny sivana nataon’ny orinasa nalaina manokana hanao izany, mba hisafidianana izay hotendrena fa tsy mety voatendry mandrak’ity ny anio. Inona no ao ambadik’izany ? Hanara-dia ny OMACI (Office Malagasy du Cinéma et de l'Image Animée) handalo tetezamita indray koa ny FER sa mety hanjavona mihitsy ? Vola be efa hatrany amin’ny 140 miliara Ariary anefa, raha ny 2018 fotsiny, no tokony hampiasaina. Maro ny fiantraikan’ny fahabangan-toerana io. Betsaka tamin’ireo orinasa nisahana fikojana lalana no mitaraina ho tsy mbola voaloa vola tamin’ny asa nataon’izy ireo. Potika ny ankamaroan’ny lalana, indrindra ny lalam-pirenena saika manerana ny Nosy. Tampoka eo indray anefa misy asa fanamboaran-dalana mandeha na ampandehanina amin’ny andro alina eto an-drenivohitra. Asam-panjakana mazava loatra satria nisy minisitra nanao latsak’alina nijery ny fizotry ny asa. Ny fanontaniana eto dia ny hoe : nisy “appel d’offre” nisokatra ve ny nanomezana ny asa sa nosokajiana ho asa maika dia natao tolotra amin'izay voafantina, ary iza no mamatsy vola ny fanatanterahana azy ? Famatsiam-bola anatiny ? Ny lalàna fanitsiana ny tetibola aza anefa mbola mihazoazo ny fampiharana azy. Ny amin’ireo asa fanamboarana amin’ny andro atoandro mivandravandra amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra aterany amin’ireo lalam-pirenena miisa dimy, mirefy 47km, mivoaka an’Antananarivo mantsy efa fantatra fa famatsiam-bola avy amin’ny BEI (Banque Européenne d’Investissement) an-dry zareo Eoropeanina anohanana ny tanànan’Antananarivo, tarihin’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana no anatanterahana azy.